Thread: &k&Sm;wyfrawmftaMumif; odaumif;p&m
ASEAN Biggest Army Join Date Nov 2010
06-26-2011 06:22 AM
Shwe Myoh Tharr,
06-26-2011 06:43 AM
- Join Date Nov 2007
Posts 2,282	Thanks 48,589
Last edited by Shwe Myoh Tharr; 06-26-2011 at 06:46 AM.
Reason: Thanks for adding labels
06-26-2011 06:47 AM
ဘီအမ်-၂၁ အတွဲလိုက်ပစ်ဒုံးကျည် ဂရက် (Grad) ဟုအမည်ပေးထားပြီး ဆိုဗီယက်တပ်မ တော်တွင် ၁၉၆၃ မှ စတင်အသုံးပြုပါသည်။ ပြောင်းဝ ၁၂၂ မမ အရွယ်ပြောင်း ၄၀ ကို၁ တန်းလျှင် ၁၀ ပြောင်းဖြင့် ၄ တန်းစီထားပါသည်။ ၄င်းဒုံးကျည်ပစ်စင်ကို ထရပ်ကားပေါ် တွင် တပ်ဆင်တည်ဆောက်ထာပြီး ထရပ်ကား၏ အင်ဂျင်စက်မှာ မြင်းကောင်ရေ ၁၈၀ အား ရှိ ရေဖြင့်အအေးပေးသော V-8 ဓါတ်ဆီအင်ဂျင်ဖြစ်ပါသည်။ အမြန်ဆုံး တစ်နာရီလျှင်
နိုင်သည်။ ၁.၅ မီတာ (၆ပေ ၉ လက်မ) ထိနက်သော မြစ်ချောင်းကိုဖြတ်နိုင် ပါသည်။ စစ်သည် ၅ ဦးရှိပါက ၃မိနစ်အတွင်း ပစ်ခတ်နိုင်ရန်အဆင်သင့်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး ကားထဲမှ၎င်း
အဆင်သင့်ဖြစ်နိုင်ပြီး အလိုအလျောက်ကျည်ဖြည့်စနစ်မရှိသဖြင့် ကျည်ပြန်ဖြည့်ရန် ၁၀ မိနစ်ကြာနိုင်ပါသည်။ အနည်းဆုံး ၅ ကီလိုမီတာ မှ အဝေးဆုံး ၄၀ ကီလိုမီတာ အတွင်း
သည့်နိုင်ငံများမှာရုရှား၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ တရုတ်၊အီဂျစ်နှင့်ချက်ကိုစလိုဗာကီးယားနိုင်ငံ တွင်ထုတ်လုပ်ပါသည်။
့်အဝေးဆုံးရောက်နိုင်သောအကွာဝေး ... ၂၀ မှ ၄၀ ကီလိုမီတာ မှန်ပြောင်းကရိယာ ........................... PG-1M Panoramic telescope
အမြန်နှုံး ........................................ တစ်နာရီလျှင် ၇၅ ကီလိုမီတာ ပြောင်းမြှောက်နိုင်အား ........................ ၀ မှ ၅၅ ဒီဂရီ
Pa Yope Sie,
07-29-2011 11:49 PM
07-30-2011 04:15 AM
,Ofwif 'Hk;ypf avmifcsmawGudk ppfyGJ rSmwGifwGifus,fus,f oHk;cJholawG u qdkAD,uf (tck &k&S) awG wJh/ uwåLoQ vdk h ac: wJ h'Hk;ypfavmifcsm awG udk *smrefeJ hwdkufwJh yGJ rSm xdxda&mufa&muf oHk;cJhzl;w,f/ *smrefawGu pwmvif &J hatmf*if qdkjyD; epfedrf; ay;xm; Muygw,fwJh.. / tajrmufawG vufvSrf;rrD wJh ae&mu aejyD; 'Hk;usnfrdk;&Gm Edkifwmudk;/ jyD;awmh um;awGay: wifxm;awmh a&G hajymif; ae&m,l ppfupm;&wmuvJ ydk oGufvufw,f/ t&if 0gaqm tkyfpk awGrSm us,fus,fjyef hjyef hwyfqifcJhzl;jyD; tar&duef awGuawmh 'Dvdk 'Hk;wGJ pHepfudk 80 0ef;usifavmuf rS pjyD; oHk;cJhw,fwJh / wdkufcdkufa&; &[wf,OfBuD;awGu &k&SawG &J hAsL[majrmuf ajrjyifacsrkef;a&; vufeufawGyg/ aewdk; awG oHk;ovdk r[kwfbJ olu vlvJ o,f vufeuf wyfqiftiftm;u vJ rsm; wJh yHkpHrsdK;/ ppfonfawGudk tvsiftjrefa&G hajymif; ae&mcsEdkifjyD; wpfBudrfwnf;rSm avaMumif; BuD;aMumif;u ae xdk;ppfqifEdkifwJh yHkpHrsdK; twGuf pDrHxm;wmaygh/ qdkAD,ufawG tz*efudk 0ifawmh olykefawGudk tBuD;tus,f 'kuay;cJhwmu tJh'd gun ship BuD;awGygyJ../ tar&duefawG qDu ycHk;xrf; av,mOfypf 'Hk;awG &jyD;wJh aemufydkif;rSmawmh tJh'd &[wf,OfBuD;awG usqHk;csdef a&mufawmh wmygyJ../ r[kwfrcH-cGef;wHk hjyefaomf-rSefaomfvnf;&SH;-vlvnf;rkef;\_/
: ) Join Date May 2010
Posts 387	Thanks 7,102
öusaemf b,frSmwif&rSef;rodvkd. 'DrSmyJwifvkdufygawm.r,f / atmufuvif.av; uppfa&; pdwf0ifpm;wJ.olawGtwGufwu,f av.vmzkd.aumif;wJ. qkd'fav;yg /
yxrurÇmppfuav,mOfawG tygt0if wkdufckdufa&; &[wf,mOf ?AkH;BuJav,mOfrsm;yg trsdK;pkHyg0ifygw,f /
'DykHav;u tar&duefav,mOfwifoabFmawGrSmokH;wJ. F/A-18 Super Hornet eJ. &k&Sm;av,mOfwifoabFmokH; Sukhoi Su-33 ukd,SOfNyxm;wmyg /
ကျွှန်တော် သဘောကျတဲ့ စစ်ရေယာဉ်အမျိုးအစားတွေပါ။ရုရှားထုတ်ဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ ဗီယက်နမ်ရေတပ်က အသုံးပြုနေပါတယ်။Trantul (HuangFeng) အမျိုးအစားကို ပြန်လည် အဆင့်မြင့်တင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စနစ်တွေကို အကြီးအကျယ်ပြုပြင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုပြင် ဗီယက်နမ်ထုတ်စစ်ရေယာဉ်သစ် အမျိုးအစားများစွာရှိပါသေးသည်။ Molnya စစ်ရေယာဉ် တန်ချိန်...၅၅၀ အကျယ်အဝန်း...၅၆.၁မီတာ တပ်ဖွဲ့ဝင်...၄၄ယောက် အမြန်နှုန်း ရေမိုင်....၃၈ လက်နက်စနစ်များ ဒုံးပျံ...အက်စ်အက်စ်အန်-အက်ဇ်-၂၅....၁၆စင်း စက်သေနတ်ကြီး...၇၆မမ အေကေ-၁၇၆အမ်...၁လက် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး...၃၀မမ အေကေ-၆၃၀အမ်...၂လက် Trantul စစ်ရေယာဉ် တန်ချိန်...၄၆၉ အကျယ်အဝန်း...၅၆.၁ တပ်ဖွဲ့ဝင်....၄၄ အမြန်နှုန်း ရေမိုင်....၃၈-၄၂ လက်နက်စနစ်များ ဒုံးပျံ...အက်စ်အက်စ်အန်-၂၂...၄စင်း စက်သေနတ်ကြီး.....၇၆မမ အေကေ-၁၇၆ဒီပီ..၁လက် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး...၃၀မမ အေကေ-၆၃၀...၂လက် BPA-500 စစ်ရေယာဉ် တန်ချိန်...၅၁၇ အကျယ်အဝန်း...၆၂ တပ်ဖွဲ့ဝင်....၂၈ အမြန်နှုန်း ရေမိုင်....၃၂ လက်နက်စနစ်များ ဒုံးပျံ...ကေအက်ခ်-၃၅...၈စင်း စက်သေနတ်ကြီး.....၇၆မမ အေကေ-၁၇၆ဒီပီ..၁လက် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး...၃၀မမ အေကေ-၆၃၀...၂လက်၊၁၂.၇မမ စက်သေနတ် ၂လက် တို့ဖြစ်သည်။ဘီပီအက်စ်-၅၀၀ကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်ပြီး ရုရှားမှ နည်းပညာများဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်ဟု သိရပါသည်။ (မိမိလေ့လာမိသလောက် ဖော်ပြခြင်းသာလျှင်ဖြစ်၍ အမှားများကို ဝေဖန်ပေးကြပါခင်ဗျာ။
air defence missileattack helicoptersmi-28nrussias-400